Ndụ na-agbanwe - akụkụ Oakleigh na ụmụaka nwere nsogbu ịma aka. - Oakleigh School na Early Years Intervention Center
Oghere LSA na Oakleigh School
Ohere MTS na Oakleigh School
Ohere maka nkwado ụkọchukwu maka otu Barnet EYSEND
site: Gabriella Czifra
E bipụtara: 16 November 2020
N’abalị iri na atọ nke ọnwa Nọvemba, abịara m ụlọ akwụkwọ anyị n’enwe ọ andụ na mmasi, enweghịkwa m ike ichere ibido mmemme anyị nke Inweta Moving in aid of Children in Need.
Isi okwu na elekwasị anya maka Childrenmụaka nọ na Mkpa afọ a bụ ịkwalite na onye mmeri maka ọdịmma site na ịgagharị na 5zọ XNUMX na Wellbeing gafee mba ahụ.
Anyị ekwesịghị iche echiche nke ukwuu iji kpebie na anyị, onye ọ bụla nọ na Oakleigh chọrọ isonye na ihe omume a. Inwe njikọ, inwe ọrụ, inwe ike ịmụ ihe; na-enyere ndị ọzọ aka ma na-achọpụta - ụzọ 5 ndị ​​a niile dị mkpa maka ụmụaka niile na ezinụlọ ha yana anyị niile, ndị ọrụ na Oakleigh.
Ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ ịhụ ọtụtụ n'ime anyị, ndị toro eto yi uwe na-acha odo odo ma kpuchie ntụpọ. Mụaka ahụ rutere n'ụdị dị iche iche na-acha odo odo, ntụpọ na ntụpọ kpuchiri ihu na ihu wee hụ ebe niile.
Kpamkpam na elekere iri, anyị bidoro nnọkọ Mbugharị na Grooving Zoom nke Yellow Class na-akwado yana ihe gbawara anyị nwere. Ọtụtụ klas na ụmụaka sonyeere anyị na n'etiti mkpọchi mba nke abụọ mgbe anyị nwere mmekọrịta mmadụ na ibe ya - lee onyinye ọ bụ ijikọ gafee ihuenyo ma kesaa oge ọ ofụ, na-emekọ ọnụ. Iji hụ mmeghachi omume ụmụaka mgbe ha hụrụ ụfọdụ ndị enyi ha na klaasị ọzọ ma kesaa obere oge ọnụ - echere m na anyị mepụtara ụfọdụ oge anwansi n'etiti nkewa.
Themụaka gbara egwu ma kwaga ma gbaa ụda ma anyị welitere ego dị egwu nke £ 43.60 nke nyere aka na ngụkọta nke mba ahụ ruru £ 41 nde.
Obi dị m ụtọ, enwere m obi ụtọ isonye na ịkwado ma kwado ụmụ anyị ka ha bụrụ 'mgbanwe ị chọrọ ịhụ n'ụwa'.